खुवालुङ संरक्षणका अभियन्ताहरुलाई छाड्न २४ घण्टे अल्टिमेटम ! - Purba Pati
५.प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य
६.प्रम ओलीले डाके सर्वदलीय बैठक
होमपेज / मुख्य समाचार / खुवालुङ संरक्षणका अभियन्ताहरुलाई छाड्न २४ घण्टे अल्टिमेटम !
खुवालुङ संरक्षणका अभियन्ताहरुलाई छाड्न २४ घण्टे अल्टिमेटम !
दमक, २७ फागुन ।
प्रहरी हिरासतमा राखिएका दिनेश काम्दुङ राई । तस्वीर : दिनेश काम्दुङ राईको फेसबुक वालबाट ।
प्रहरी हिरासतमा राखिएका खुवालुङ क्षेत्र संरक्षण समितिका सदस्य दिनेश काम्दुङ राई र अभियन्ता साजन राईलाई बिना शर्त छाड्न माग गरिएको छ ।
खुवालुङ क्षेत्र संरक्षण समितिले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै राईद्वयलाई २४ घण्टाभित्र रिहाई गर्न प्रहरी प्रशासनलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।
गत फागुन २४ गते खुवालुङ बचाउ अभियानका अभियन्ताहरुलाई स्टीमर बोटबाट खुवालुङ (त्रिवेणी घाट) लैजाने विषयमा सप्तकोशीका बोट सञ्चालकहरुसँग भएको सामान्य विवादकै निहुमा बिहीबार उनीहरु दुवै जनालाई महेन्द्रनगरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा छलफलको लागि भन्दै डाकेर प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो ।
संरक्षण समितिका सचिव दिला राईबाट जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘उक्त विषयलाई सहज समाधान गर्नको सट्टा विषय अन्तर गरी सुनुयोजित एवम् षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट अभियान्ताकर्मीहरुलाई राज्य प्रशासनले विभेद्पूर्ण ढङ्गबाट पक्राउ गरिएकोयस घटना हामी सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षका लागि कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य छैन ।’
प्रहरीले राईद्वयमाथि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा तत्काल हिरासतमुक्त नगरे खुवालुङ संरक्षणमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुले निर्णायक आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिइएको छ ।
खुवालुङ दूधकोशी, अरुण र तमोर नदीको त्रिवेणीमा रहेको ढुङ्गा हो । जुन डुङ्गालाई किराती समुदायको मुन्धुमी मिथ, शक्ति र आस्थाको प्रतीक मानिन्छ । गत फागुन ८ गते बिराटनगरमा आफ्नो समूहको भेलामा भाषण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्टीमर बोट सञ्चालनमा बाधा पुर्याएको भन्दै खुवालुङलाई क्रेन लगाएर फुटाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति किराती समुदायको आस्थामाथिको प्रहार भएको ठहर गर्दै खुवालुङ संरक्षणको लागि विभिन्न संघसंस्थाहरुले अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।